မိုးစက်ဝိုင် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Politics, Issues » မိုးစက်ဝိုင်
Posted by Wow on Oct 30, 2013 in Politics, Issues | 23 comments
တကယ်တော့ မိုးစက်ဝိုင်ကို ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ ချစ်ခြင်းမုန်းခြင်းမရှိပါဘူး… လူမျိုးခွဲခြားဖို့လား… ဟေးးး ဝေလာဝေး.. တော်တော်ကိုယ့်အနွံအတာခံတဲ့ တရုတ်သူငယ်ချင်းတွေရှိသလို ဘင်္ဂါလီ ထဲမလဲ သူငယ်ချင်းရှိပါတယ်…. တဇွတ်ထိုး တစ်ဇောက်ကန်းစိတ် ရှိပေမဲ့ ကိုယ်သွားလည်ရင် သောက်ဆမ်းတို့ ငါးငရုပ်သီးချက်တို့ မစားပဲ မပြန်ရအောင်ချက်ကျွေးတဲ့ ရခိုင်သူငယ်ချင်းလဲရှိပါတယ်…
ပြောချင်တာကတော့ Nothing personal… ပါ…
ပြောရရင် သူဟာ မြန်မာကို ကို ကိုယ်စားပြုပြိုင်နေတာ လို့ မခံစားရပဲ… ခရိုနီတစ်စုနဲ့ မြန်မာသာမန်လူတန်းစားတို့ ကြားက Symbol လို့မြင်ပါတယ်…..
ဖိုးလပြည့်နဲ့ ကိစ္စပေါ်ပြီးတဲ့နောက်… ဖေ့ဘုတ်မှာ ပလူပျံအောင် သူ့ဘက်ကိုယ့်ဘက် အပြန်အလှန်ရေးကြတဲ့ အထဲမှ ဘယ်သူဘာပြောပြော မိုးစက်ဝိုင်တို့ က စင်ပေါ်ကပါ။
ဘယ်မှာတွေ့နိုင်သလဲ ဆိုရင် နိုင်ငံပိုင် သတင်းစာတွေမှာ စာမျက်နှာပြည့် နေ့တိုင်းနီးပါး သူမအတွက် ဂုဏ်ယူကြောင်းအလှည့်ကျ ကြော်ငြာပေးနေတဲ့ ခရိုနီတွေပါ….
ခရိုနီတွေဘက်က…. ဒင်းတို့ကများ တသက်လုံးမော်မကျိခဲ့ဘူးတဲ့ ငါတို့ကို တူနိုင်မယ် မထင်ကြနဲ့ ကိုးဆယ်ဆကွာလိမ့်မယ် ဆိုပြီးညှိုးတာကို ဘယ်မှာ အထင်အရှားတွေ့နိုင်လဲဆိုရင် ရှရုသွားတော့ သာမန်ဆိုရင် အနေအထိုင် ဆင်ခြင်သင့်တဲ့အချိန်မှာ မိုးစက်ဝိုင်က ဗိုလ်တစ်စုနဲ့ ပျော်ပျော်ပါးပါး ဘူ့ဂုစိုက်ရမလဲ စတိုင်မျိုး တွေ့ရမှာပါ……
မြန်မာသာမန်လူတန်စားဘက်ကကော… တစ်သက်လုံး အော့နှလုံးနာ မုံးခဲ့ရတဲ့အမုန်းတွေက မိုးစက်ဝိုင်ပေါ်ပုံချ တာပါ…. မိုးစက်ဝိုင်ဘက်က ကျိရင် မတရားဘူးလို့ ဆိုနိုင်ပေမဲ့… ဒီနေရာမှာတော့ အနော့်ချိန်ခွင် တစ်ခြမ်းစောင်းပါရစေ….
အချိန်ကိုက်ပဲ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က နိုင်ငံတစ်ကာခရီးမှာ မွတ်စလင်တွေကို လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှုတွေ ရှိမနေပါဘူး။ အစိုးရရဲ့ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးမှာ လိုအပ်ချက်တွေရှိခဲ့လို့ အခြင်းခြင်း အမုန်းပွားကုန်ကြတာပါ။ စစ်အစိုးရအုပ်ချုပ်မှုအောက်မှာ မြန်မာနိုင်ငံကနေ လက်လွတ်ထွက်ပြေး၊ ပြောင်းရွေ့ခဲ့ရတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသား အများရှိပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံသားများလဲနစ်နာမှုတွေ အများကြီး၇ှိပါတယ်…. စတဲ့ အဓိပါယ်ကို BBC အင်တာ ဗျူးနဲ့ တစ်ခြားမိန့်ခွန်းတွေမှာပြောခဲ့ပါတယ်… တပ်ထွက် အများစုဟာ အ၀တ်အစားလဲလိုက်တာသာရှိပြီး စိတ်ထားတွေ ပြောင်းမလာပါဘူးတဲ့….
တစ်ခါလာရွှေဧည့်သည် နှစ်ခါလာငွေဧည့်သည်ဆိုသလို တိုင်းပြည် လက်ရှိ အခြေအနေတွေအရ မျက်နှာငယ်ငယ် နဲ့ အဖြစ်မှန်ကို နိုင်ငံတကာသိအောင် ပြောပြနေတဲ့ ဘွားတော်ကို ကျိပီး စိတ်ထဲ ဘယ်လိုမှ မကောင်းပါ….
အနော့်ချိန်ခွင် ထပ်ပြီး တစ်ဘက် စောင်းပါရစေအူး….. ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လောက် မြန်မာနိုင်ငံကို စေတနာ ထားတဲ့ ခေါင်းဆောင်မျိုး ဆယ်ဆုနှစ် တော်တော်များများ ထပ်မပေါ်နိုင်တော့ပါဘူး….
ဒီလို နိုင်ငံရေးအရေးကြီးနေတဲ့ အချိန်မှာ ခရိုနီတွေကတော့ မိုးစက်ဝိုင်အရေး တို့အရေးဖြစ်နေပါတယ်။
မိုးစက်ဝိုင်အောင်ပွဲရသွားရင် ခရိုနီအောင်ပွဲလို့ပဲ မြင်ပါတယ်….
လူဦးရေ သန်း ၆၀ ထက်ပိုပြီး မိုးစက်ဝိုင်ကို မချစ်နိုင်ပါဘူး….
ဟတ်ကဲ့ … အနော် တောက်ကျင့် မကောင်းဝူး လူမျိုးရေးခွဲခြားတယ်… မိုးစက်ဝိုင်အပေါ် မနာလိုစိတ်ကြီးတယ်… ပြောလဲ… မှန်တာပေါရရင် တောက်ရေးမစိုက်ပါဝူး…
သူမဟာ ခရိုနီတွေရဲ့ Symbol ဖြစ်နေတဲ့အတွက် အနော်သူမကို လက်ခုတ်တီးမပေးနိုင်ပါဘူး…..
ဒါပါပဲ…. အလိုမတူသူများ စဆဲလို့ရပါဘီ….
“ဟေ့ ယောင် လာကွာ လ္ဘက်ရည်တိုက်မယ်
မုန့်လဲ စား မာဘိုရိုလဲ သောက်”
အနော် လက်ဘက်ရည်လဲသောက်ပါတယ်… မုန့်လဲစားပါတယ်… လာ… လဗင်းဖက်ပီး လက်ဘက်ရည်ဆိုင် သွားရအောင်
မဆဲဘူးရဲဘော် ဆက်လုပ်။ သဘောထားခြင်းထပ်တူထပ်မျှပါ။ အစကတဲက ကြည့်မရလို့ လုံးဝမဗုတ်ခဲ့ဘူး။ အဲဒီသစ်သစ်မြင့်ဆိုင်ကြီးကဲကဲလုပ်နေတာလဲ တောက်ညင်ကပ်နေဒါ။ ဒါပေသိ သူ့ဝေါပေါ်သူရေးသမို့ အသာကြည့်နေတုန်း ဗြုန်းဆို မနက်က အိုက်ဒါဂျီးလဲတွေ့ရော မနေနိုင်လို့ ၀င်မန့်ခဲ့သေး။ ကိုယ့်ဝေါပေါ်လဲ ရှဲလိုက်ပြီး ဆဲလိုက်သေး။ ကြည့်ကိုမရလို့။ ရွှေကျေးကတော်တော် မယ်ဘော်ကကဲကဲတွေပါအေ။ ကြည့်ကိုမရဘာဘူး။
” ဗေဒင်မေး ယတြာချေ ဘုရားမှာပွဲထိုး ဘုရားသခင်ဆီမှာဆုတောင်း အာလာဆီမှာတောင်း ဟိန်ဒူဘုရားကျောင်းမှာတောင်း ဘယ်မှာကျန်သေးလဲ အဲနတ်ကနားပွဲပေး”
လို့ အိုက်လိုလေး သူ့ပိုစ့်မှာအားပေးခဲ့တယ်။ အခုလောက်ဆိုဆဲခံနေရလောက်ပီ။ ပြန်သွားမကြည့်ရသေး ဘူး။
ဂယ်က အသဲလေး ဝေါပေါ်တွေ့လိုက်လို့ ဒီပို့စ် ရေးဖြစ်တာရယ်….
ပထမ မိုးစက်ဝိုင်ကိုကြည့်မရဘူး။ ဟိုမျောက်ကလေးနဲ့ပေါင်းလို့။ ဒါပေမဲ့ ဒီလောက်တောက်ညင် မကပ်ဘူး။ အိုက်ဒီ သစ်သစ်မြင့်ဆိုင်ကြီး လုပ်မှပဲ ပိုတောက်ညင်ကပ်သွားလို့ လုံးဝလှည့်ကိုမကြည့် တော့ဘူး။ တကတဲ။ ဟိုကနာမည်ကြီးတာထက်သူကပိုနာမည်ကြီးချင်နေဒါ။
ဘယ်အရာမဆို ပုံမှန်ထက်လွန်လာရင်တော့ လက်မခံချင်ဘူး
သူ့ဟာသူလေး ဖြစ်နေရင်ကို အားပေးနေဦးမှာ
ဒါပေမယ့် ဒီလို သည်းသည်းလှုပ်တွေ တွေ့တော့
သူရို့လဲ နိုင်ငံရေးတော့ မျက်ခြေမပြတ်လောက်ဝူးထင်တာပဲ ဒဂျီးရယ်
ပြောလို့တော့မရဘူး… ဒေါ်နယ်ထရမ့်က.. အိုဘားမားရှေ့ကနေ မြန်မာပြည်သွားပြချင်နေတာ… ကွိခုကွိခု..
ခုမှ မြန်မာအတွက် မြန်မာဖြစ်ရတာ လက်မထောင် ရတဲ့ အတိုင်းပဲ။
ကိုယ့်တန်ဖိုးထားတဲ့ ကိုယ့် အိုင်ကွန်က သပ်သပ်ရှိပြီးသားပါ။
ဗီဒိုဇွတ်လမ်းတွေ ထဲကလို အတင်းသဘောထားကြီးချင်ရောင်တော့ ဆောင်မနေနိုင်ဝူးအေ…. နွားပလာတာ ကျွေးသလို… မတန်လို့ပါ..
နီ နီ ပြာပြာ
လည်ပင်းမှာ Myanmar လို့
အားပေးဆဲပါ ၀ိုင် …
အမျိုးသားရေးတာဝန်ကို ကျေပွန်စွာထမ်းဆောင်တဲ့ ကထူးဆန်းကို ဗရာဗိုပါ။
အမျိုးသမီးရေးတာဝန်ကျမှပဲ ထမ်းဆောင်တော့မယ်။
ရွာထဲ ဝိုင်ကြိုက်သူတွေ များသနော်။
တို့ မန့်တာတွေ ရဲနေပြီ။
တယုတ်မျိုးဟေ့ ဒို့ ဘမာ။
နိုင်ငံက အဆင်းရဲဆုံး စာရင်းမှာရှိ၊ နိုင်ငံက လူတစ်စုက အချမ်းသာဆုံးစာရင်းမှာရှိ တဲ့အထဲ မယ်စကြာဝနာ ကို မြန်မာရသွားရင် ဘယ်လိုဂုဏ်ယူရမှန်းမသိပါဝူးအေ…. ခတောင်းကျိုက်တခြား ဟိုသင်းတလွဲဆိုသလို မယ်စကြာဝနာရေးကျ ငတို့အမျိုးသားတွေ တယ် တက်ကြွသဂိုးးးးးး
ဘာပဲပေါပေါ ဟိုဝံကျီးပေါသလို တရုတ်ကျေးဇူးဆပ်မကုန်ပါဝူး… ပစ်မှားမိတဲ့ အနော် သေသင့်ပါတယ်
မိုးစက်ဝိုင် ဟာ မြန်မာနိုင်ငံကိုယ်စားပြုတာပါ။ ခရိုနီ ကို ကိုယ်စားပြုတယ်လို့ မယူဆပါဘူး။ ဒေါ်စု နဲ့လည်း မတူတဲ့ နယ်ပယ်ကပါ။ မိုးစက်ဝိုင် အောင်ပွဲဟာ ခရိုနီ အောင်ပွဲလို့ နားလည်လို့ မရပါဘူး။ သူရမယ်လို့လဲ မထင်ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသားတွေရဲ့ ပုံရိပ်ကောင်းကောင်းကို သူမ သယ်ဆောင်ပေးမယ်လို့ ယူဆတယ် အကယ်ရွေ့ သူမဟာ လိမ်မာပါးနပ်ပြီး စမတ်ကျကျ နေထိုင်ပြောဆိုနိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ပေါ့။ ဒါကြောင့် မို့ အားပေးပါတယ်။ မိုးစက်ဝိုင် မှမဟုတ်ဘူး ဘယ်သူသွားသွားအားပေးမှာပါ။ ဟီးး တယုတ်အားပေးဟုတ်ဘူးနော်။ နည်းနည်းတော့ကြောက်တယ်။
မိုးစက်ဝိုင်က တကယ်လည်း တရုတ်တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာပြည်မှာ မိုးစက်ဝိုင်လို တရုတ်တွေလည်း အများကြီးဖြစ်ပါတယ်။
တရုတ်တိုင်း မကောင်းတာမဟုတ်ပါဘူး ..မကောင်းတဲ့သူများခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်
ဒါပေမယ့် .. ခုဟာက သူက တရုတ်မ ဆိုပြီး မြန်မာပြည်ကိုယ်စားပြုပြီး ၀င်ပြိုင်တာမဟုတ်ပါဘူး
မြန်မာနိုင်ငံသားအနေနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံကိုယ်စားပြုပြိုင်တာပါ … ဘယ်လိုအဆက်အသွယ် ဘယ်လိုအရည်အချင်းမျိုးတွေနဲ့ သူ ဒီအဆင့်ရောက်လာတယ်ဆိုတာတော့ စိတ်မ၀င်စားသလို နောက်ကြောင်းလည်း မကြည့်ပါဘူး.. ကိုယ်နဲ့ မဆိုင်သလိုပဲ သဘောထားပါတယ်။
အခု ဖြစ်နေကြတဲ့အနေအထားမှာ မိုးစက်ဝိုင်ကို တရုတ်မဖြစ်လို့ မုန်းကြတာထက် .. ဟိုလူစုနဲ့ ရောနှောတဲ့အတွက် မုန်းကြတာက ပိုများတာပါ.. အားပေးတုန်းကလည်း သူတို့ပဲ ကဲကဲစပ်
ကဲ့ရဲ့တော့လည်း သူတို့ပဲ ပက်ပက်စက်စက်တွေကို အွန်လိုင်းမှာအများကြီးတွေ့နိုင်ပါတယ်။
နောက် .. မယ်တွေထဲမှာ ကြည့်မယ်ဆိုရင် သူဟာ miss universe ရနိုင်လောက်တဲ့ အဆင့်မဟုတ်ပေမယ့် တချို့နိုင်ငံက မယ်တွေထက်တော့ အတော်သာလွန်တယ်ဆိုတာတော့ ၀န်ခံရမှာပါ။ ဒါတွေပြောနေလို့ .. ကျွန်တော်က မိုးစက်ဝိုင်ဘက်တော်သားမဟုတ်သလို .. မိုးစက်ဝိုင်မုန်းသူတွေရဲ့ ထောက်ခံသူ ၊ အတိုက်အခံ ဘာတစ်ခုမှကို မဟုတ်တာပါ …
မိုးစက်ဝိုင်ကို အားပေးသူမဟုတ်သလို ထောက်ခံသူလဲမဟုတ်ပါဘူး .. တစ်ချက်မှ မဲ ကို ကလစ်မနှိပ်သလို ..ဆဲတဲ့ထဲ ကဲ့ရဲ့တဲ့ထဲလဲ မပါ ပါဘူး ……. ကျွန်တော့်မျက်စိထဲကို ရောက်အောင် မဆွဲဆောင်နိုင်တဲ့အတွက် …… မဲ မပေးပါဘူး .. (ခင်ဝင့်ဝါတုန်းကတော့ မျက်စိထဲလှတယ်ထင်တဲ့အတွက် အခါပေါင်း ၃၀လောက် ကလစ်မိပါတယ် ..)တချို့ မယ်တွေရဲ့ အလှက ပိုဖမ်းစားနိုင်ပေမယ့် ..မြန်မာနိုင်ငံကိုယ်စားပြုပြီး ၀င်ပြိုင်တဲ့သူရှိတဲ့အတွက် ကိုယ့်မဲ တစ်ခုက မြန်မာနိုင်ငံအတွက် အရှုံးမဲစာရင်းထဲပါမှာစိုးတဲ့အတွက် အခြားဘယ်မယ် ကိုမှလဲ မဲမပေးပါဘူး ….. စကားချုပ်လိုက်ရင်တော့ .. အဲဒီအကြောင်းက စာရင်းထဲကို မရှိပါဘူး … ခု ဟိုနေရာလည်း မိုးစက်ဝိုင် ဒီနေရာလည်း မိုးစက်ဝိုင် ခရိုနီ တရုတ်မ ဆိုတာတွေကို တွေ့လို့ ကိုယ့်အတွေးအမြင်ကို ဖော်ထုတ်ခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်… ကျွန်တော့်အနေနဲ့ကတော့ နေသာသပ လေညှာကပါပဲ .. အဟိဟိ
မနှင်းဖြူရယ် မှန်တာပေါရရင် အနော်လဲ တူ့ဂိုစိတ်ထဲကို မရှိတာပါ… နန်းခင်ဇေယျာတုံးကတော့ အားပေးမိတယ်.. ခလေးမလေး လူမှုရေးတွေလုပ်တော့လဲ အော် တိုင်းရင်းသာပီပီ ဖြူစင်တယ်ပေါ့… ခင်ဝင့်ဝါက စပီး နောက်ပိုင်း စိတ်ကို မ၀င်စားတာ… ကွယ်… ဒီထက် အရေးကြီးကိစ္စ အများကြီးရှိတာ.. ဆင့်အ၀ှာ အနာ မလုပ်ချင်ပါဘူး… ဒါပေသိ… ခုက နဲနဲ နိုင်ငံရေးပါလာလို့
ကျ​နော်​မျိုးမက​တော့ ​စောင့်​ကြည့်​​နေတယ်​…ဘယ်​အချိန်​ အင်​ဇာဂီ တစ်​​ယောက်​…မိုးစက်​၀ိုင်​ဘလာစီယာနဲ့ချပ်​၂ရပ်​၂ဖြစ်​​နေတဲ့ပုံတင်​ပြီး ၀ိုင်​​လေး လို့ထ​အော်​မဲ့အချိန်​ကို…….
အညိုးဒွေကြီးလိုက်ဒါ တိမီးကြီး မမဝေါင်းရယ်..
သူဂလေး ဘီကီနီလေးတွေ ၀တ်ပြီး ဟပြတော့လည်း
ကိုရင်တို့လို့ ခရိုနီမဟုတ်တဲ့ ဖရုံစေ့တွေ အသက်ရှည်ပါဒလယ်ကွယ်..